Health & Fitness Archives - Page 5 of 42 - Zimbabwe Today
Home/Fashion/Health & Fitness (page 5)
Zimbabwe: Mnangagwa to Take First Covid-19 Jab As He Launches Vic Falls Vaccination
4 weeks ago	Health & Fitness 0
President Emmerson Mnangagwa is Wednesday expected to officially launch the country’s second phase of the Covid-19 vaccination programme in Victoria Falls, as government takes steps to inoculate all willing residents in the resort town. Health and Child Care deputy minister John Mangwiro has been in the city since weekend …
Zimbabwe: Covid-19 – Media Called to Unpack Myths On Vaccines
4 weeks ago	Health & Fitness, News 0
By James Muonwa LOCAL media organisations have been challenged to give accurate and timely information relating to the five approved Covid-19 vaccine options in the country in order to demystify myths and misconceptions surrounding the world’s most sought after medicine. Media Monitors director, Patience Zirima said journalists had a huge …
Zimbabwe: First Lady Says to Get Own Covid-19 Jab
First Lady Auxilia Mnangagwa, seen as dodging vaccination since the national inoculation process began few weeks back, says she is still going to take the Covid-19 jab while urging the nation to also get vaccinated. She was speaking in Kwekwe Wednesday while presiding over a donation ceremony to the less …
Zimbabwe: I Have Been Vindicated, Mutodi Says Over Dead Magufuli
By Robert Tapfumaneyi ZANU-PF legislator for Goromonzi West, Energy Mutodi says the death of Covid-19 sceptic, Tanzanian President John Magufuli has justified his earlier comments on the unorthodox way the late leader handled the deadly virus in his country. Mutodi was fired as information deputy minister in May last year …
Zimbabwe Now Produces Own Fertiliser
By Blessings Chidakwa Zimbabwe now has the capacity to produce enough fertiliser adequate to cover an annual cropping season. Over 100 000 tonnes of top dressing and basal fertiliser for 100 000 hectares of land under winter cropping is currently being manufactured. This manufacture of fertilisers is expected to significantly …
Africa: Chaos As French Authorities Bar Players
4 weeks ago	Health & Fitness, Sports 0
By Grace Chingoma Senior Sports Reporter THIS month’s 2021 Nations Cup qualifiers have been thrown into chaos, after French authorities barred all African players, from leaving to represent their countries, this month. It’s a huge blow for a number of West African countries, who have the bulk of their best …
Zimbabwe: Frontline Workers Speak On Low Covid-19 Vaccine Uptake
4 weeks ago	Business, Health & Fitness 0
By Fadzai Ndangana Medical professionals have attributed the low uptake of Sinopharm Covid-19 vaccine among frontline health workers to social media reports that the donated Chinese doses were for experimental purposes with no data on efficacy and side effects. In an interview with 263Chat, Zimbabwe Professional Nurses Union Secretary General …
Zimbabwe: Parly Launches Breastfeeding Facility for Sitting Legislators
By Fadzai Ndangana The Parliament of Zimbabwe has launched a breastfeeding facility for lactating legislators to nurse their babies during sittings as a move to promote breastfeeding at work scheme for women. The facility, a collaborative effort with a local non-governmental organization, the Zimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition …
Zimbabwe: Herd Immunity Is Solution to Covid-19
March 17, 2021	Health & Fitness, News 0
By Lovemore Hungwe Correspondent On March 16, the second batch of Covid-19 vaccines donated by China arrived at Robert Mugabe International Airport in Zimbabwe’s capital Harare. The handover ceremony which took place at the airport was attended by President Mnangagwa, together with Chinese Ambassador to Zimbabwe Guo Shaochun. In an …
Zimbabwe: ‘We Have Full Trust in Sinopharm Vaccine’ – Chinese Ambassador
March 14, 2021	Health & Fitness, News 0
By Anna Chibamu CHINESE Ambassador to Zimbabwe Shaochun Guo says his country’s Sinopharm vaccine for Covid-19 prevention is safe even for people with underlying conditions. The ambassador was responding to questions from the media during a virtual press conference organised by the Health Ministry in-conjunction with United Nations Population Fund …
Mixed reactions to poll outcome
Zanu-PF Extends Olive Branch to Teachers, Doctors and Nurses, Says Services to Be Reviewed
AfDB partners African First Ladies
Misa lobbies for positive changes on new media Bills